आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधबार
साउन ६, २०७८ ०८:३८ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण ६ गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई २१ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको द्वादशी तिथि दिवा २ः२२ बजेसम्म, त्यसपछि त्रयोदशी रहनेछ ।
मेष – चिन्ता बढ्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले धोका दिन सक्छन्, सजक रहनु होला । आर्थिक लेनदेनमा समस्या उत्पन्न हुनेछ । स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ ।सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा नैराश्यता छाउनेछ ।
वृष – पतिपत्नी बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । उत्साह उमंग छाउनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँग भेट हुनेछ । विशिष्ट कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ । ऐतिहासिक कार्यको आरम्भले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ पाइनेछ ।
मिथुन – सामान्य झमेला आइलागे तापनि दृढताका साथ कार्यमा लाग्नुहोस्, जित तपाईँको नै हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । समर्थकहरु बढ्ने छन् । विपक्षी समेत मेलमिलापमा आउन बाध्य हुनेछन् ।
कर्कट – शत्रू पक्ष कमजोर बन्ने छन् । अघिदेखिका समस्या हल भएर जानेछन् । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । बौद्धिक क्षमताको बृद्धि विकास हुनेछ । मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ । भोजभतेरको निम्तो पाइनेछ ।
सिंह – दैनिक गर्दै आएका कार्यमा समेत समस्या सृजना हुनेछ । आफन्तजनसँग नै विवाद होला । असन्तोषी प्रवृत्तिले सताउनेछ । श्रमको सही मूल्यांकन मिल्ने छैन । मातृ पक्षको साथ सहयोगले कार्य गर्नुहोला ।
कन्या – पराक्रम बढेर जानेछ । कृषि एवं बन्दव्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन विशेष लाभकारक रहनेछ । हर्ष बढ्नेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउला ।साथीसंगीसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ ।
तुला – अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा लाभ लिन पाइनेछ । मन खुसी रहनेछ । द्वितीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले अलमलको वातावरण बन्न सक्छ, पूर्व तयारीका साथ कार्यमा लाग्नु होला ।
बृश्चिक – समय सुधारोन्मुख रहेको छ । मान्यजनसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । बोलिकै भरमा ठूला ठूला कार्य बन्ने छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा चासो रहनेछ । भौतिक सुख सुविस्ताका साधनहरु जुट्ने छन् ।
धनु – टाढाको यात्रा कष्टकर रहला । व्यर्थको कार्यमा भुल्दा महत्वपूर्ण अवसर फुत्कनेछ । आम्दानिको तुलनामा खर्चको मात्रा ज्यादा हुँदा तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ । असन्तोषी प्रवृत्ति रहनेछ ।संयम रहनु पर्नेछ ।
मकर – सानो लगानिले नै धेरै लाभ मिल्दा, हर्ष बढ्नेछ । आय मूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । अवसरहरुहले पछ्याउने छन् । नयाँ मित्र बनाइनेछ । सुखसुविस्ताका साधनहरु जुट्ने छन् । आकस्मिक लाभ हुनेछ ।
कुम्भ – शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नतिको संकेत देखिन्छ । विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा लगानि गरिनेछ । विश्वास दिलाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ । आत्मबल आत्मविश्वास थपिनेछ ।
मीन – स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । अवसर प्राप्तिको योग बनेको छ । टाढिएका आफन्तजनसँग मिलन हुनेछ । परोपकारी कार्यमा सहभागी भइनेछ । जिम्मेवारी बढ्नेछ । रोकिएका वित्तिय कारोवारले गतिलिनेछन् ।